Faallooyinka – Page 2
AKHRISO:- CCWarsame oo markale sheegay in DFS ay abaabulayso colaad ka dhan Galmudug iyo Jubbaland “Taasi ma ahan masuuliyad sax ah”.
June 2, 2019 Xafiiska Puntland 3
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah hoggaanka sare ee Xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir ayaa ka dhawaajiyay inuu jiro qorshe la doonayo in lagula diriro maamullada Galmudug iyo Jubbaland oo xilligan ay fara-gelin ku
Puntland iyo Somaliland waxay birri is dhaafsanayaan Maxaabiistii lagu kala qabsaday Dagaalkii Tukarraq.
June 2, 2019 Xafiiska Puntland 11
Wararka hoose oo ay heleyso Marqaannews ayaa waxaa sheegayaan in uu socdo qorshihii ugu dambeeyay ee ay Puntland iyo Somaliland isku weydaaran lahaayeen Maxaabiistii ay kala qabsadeen. Labada Maamul ayaa birri oo Isniin ah si
Xog:- Kim Joung-un oo la ogaaday inuu khaarijiyay kooxdii uqaabilsanayd wada hadalka Trump + Xabsi.
June 1, 2019 Xafiiska Puntland 1
Qaar ka mid ah Warbaahinta Caalamka ayaa si weyn uga hadleysa Warbixin cusub oo sheegaysa Hoggaamiyaha Kuuriyadda Waqooyi Kim Jon Un in uu laayay inta badan Hoggaamiyeyaasha u qaabilsanaa Wadahadalladii Mareykanka iyo Kuuriyadda Waqooyi. Waxaa
Akhriso:- 82 caruur ah oo aabayaashood loo dilay shaqadooda saxaafadeed ayaa maanta lasiiyay lacag Ciidsiin ah.
June 1, 2019 Xafiiska Puntland 6
Magacyada Wariyaashii Eebbe oofsaday ee ka howl galaayay Muqdisho iyo tirada carruurtoodii ay ka tageen oo maanta uu ciidsiiyay xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya. Ilaahey Jannadiisa haku gallado, carruurta ay ka tageena haku xifdiyo dunidaan quruxda
Update:- Puntland oo hadiyado kale oo qaali ah gudoonsiisay saraakiishii hogaaminaysay askartii soo goosatay
May 31, 2019 Xafiiska Puntland 33
Puntland ayaa Gawaari ku abaalmarisay Saraakiisha Ciidamadii reer Sanaag ee kasoo Wareegay Somaliland. Shalayto ayaa sidoo kale dalacsiin loo sameeyay Saraakiishan. Aqlabiyadda Ciidamadii Sanaag Bari ee Somaliland ayaa Ku Biiray maamulka Puntland iyo Madaxdiisi oo
Faalo:- Talo muhiim ah oo ku wajahan Beesha Warsangeli ee Sanaag “Kala dooro Isaaq iyo Marjeerteen”.
May 30, 2019 Xafiiska Puntland 10
Tan iyo bur-burkii dawladii dhexe ee soomaaliya oo haatan laga jooga ku dhowaad 30 sanno guud ahaa gobolka sanaag inyar mooyee intiisi kale kama jirin wax maamul dawladeed ah oo awoodleh waxuuse ka mid ahaa
Daawo degdeg:- Puntland oo ku dhawaaqday in ay qaramaynayso 800 oo askari oo isaka soo dhiibay gobolka Sanaag + Xafladii Ballibusle.
May 30, 2019 Xafiiska Puntland 21
Sanaag: Puntland oo qaramaysay sideed boqol oo askari iyo guddoomiye gobol oo kasoo goostay Somaliland. Magaalada Balli-busle ee gobolka Sanaag ayaa waxaa maanta lagu qabtay xaflad wayn oo lagu soo dhoweynayo ciidamo, saraakiil iyo guddoomiyihii
Warbixin:- Damacii Muuse Biixi ee Sanaag oo fashilmay iskuna badalay bilaawga baaba’a gobollada maamulkaasi “Sanaag maxaa kadhacay?”.
May 30, 2019 Xafiiska Puntland 6
21-kii bishan May ciidamada Somaliland waxay degmada Damalla Xagare ee gobolka Sanaag ka celiyeen wasiirka waxbarashada Puntland oo ka soo jeeda degaankaasi. Wasiirka oo degaanno hore laga celiyay ayaa isaga oo hadal ka jeedinaya Damalla
Sawiro+Akhriso Magacyada wasiirada,gudoomiyaasha,Taliyaasha,iyo cuqaasha ka qayb galaysa munaasabadda Balibusle.
May 30, 2019 Xafiiska Puntland 0
Waxa xaflada loo qabanayaa G/Dhexe Xuseen Faarax Aadan (Dheere) G/dhexe C/rashiid Axmed Jaamac (Xayle) Iyo Gudoomiyihii Gobolka Badhan , Ciidamo fara badan oo dhamaantood ka soo goostay Somaliland kadib markii ay ka biyo diideen amar
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo abaabul dagaal durba ka bilaabay Badhan + Kulamo adag oo hada socda.
May 29, 2019 Xafiiska Puntland 9
Guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) oo saaka gaaray maagalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa halkaasi kulan kula qaatay wasiirka Amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan iyo wefdi uu hoggaaminayo oo maalmahan ku
Daawo Waraysi:- Laba todobaad gudahooda Somaliland waxaa kasoo goostay 600 oo Askari oo badankood udhashay Sanaag.
May 29, 2019 Xafiiska Puntland 3
Tan iyo wixij ka dambeeyay markii dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo xiisadaha Colaadeed ka curtay gobolka Sanaag waxaa isa soo tarayay saraakiisha iyo askarta kasoo goosanaysa Somailand kuna so biiraysa Puntland. Inta waxgaradka gobolku ay xaqiijiyeen askar
Daawo:- Haweenka Ceelbuh oo hanjabaad udiray Sland “Anaga daarood baynu nahay idiin ma rabno hadaad ciideena timaadaan wan idiin ku jihaadeynaa”.
May 28, 2019 Xafiiska Puntland 10
Qaar kamid ah haweenka degmada Ceelbuh ee gobolka Sanaag ayaa isugu yimid kulan balaadhan oo ay ku diidanyihiin dhaqdhaqaaq Somaliland ee gobolka iyagoona si cad usheegay inaysan ahayn Somaliland balse ah yihiin Puntland. Hawernka ayaa
Daawo:- Muuqaalka banaanbixii maanta ka dhacay Xingalool ee lagu soo dhaweeynayay saraakiisha Sland kasoo goosatay.
May 28, 2019 Xafiiska Puntland 4
Shacabka Magaalada Xingalool ee gobolka sanaag ayaa maanta isugu soo baxay banaanbax lava ujeedo xanbaarsan oo kala.ah eedeynta Somaliland iyo soo dhaweynta saraakiil sarsare oo kasoo goosatay Somaliland. HALKAAN KADAAWO
Faahfaahin:- Ganacsade ay isku Heyb yihiin Muuse Biixi oo lagu weeraray Laascaanood + Beesha Xildh.Dhakool oo weerarkaasi fulisay.
May 28, 2019 Xafiiska Puntland 0
Wararka kusoo dhacya warqabadaka Marqaannews ee inaga soo gaadhaya magaalada Laascaanood ee xarunga gobolka Sool ayaa sheegaya in dablay hubaysani dhexda u galeen baabuur uu watay nin ganacsade ah oo ay xigto yihiin Madaxwaynaha Somaliland
Taliyaashii Warsangeli ee Somaliland uqaabilsanaa Sanaag oo diiday in weerar lagu qaado Wasiir Galan oo Badhan jooga “Puntland miyay ku biirayaan saraakiishaan?”.
Saddex taliye oo ka tirsanaa ciidamada Somaliland ee gobolka Sanaag oo ka soo jeeda bariga gobolkaasi, ayaa sida la xaqiijiyay caawa ciidamadooda kala baxay Somaliland. Taliyaasha oo kala ah; Xuseen Faarax Aadan (Xuseen Dheere), Guray
Warbixin:- Ma dhab baa in Sirdoonka Alshabaab ay ushaqeeyaan sida Jinniga oo kale?.
Kooxaha Islaamiyiinta ah ee Soomaaliya ayaan wali awooddooda hoos loo dhigin iyadoo uu jiro ololaha Qaramada Midoobay ee 12sano jirsaday ee ka dhanka ah Islaamiyiinta Soomaaliya ka dagaallama. Kooxahaan ayaa leh garab sirdoon oo si
Degdeg:- Khilaaf ka dhex curtay saraakiisha ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag + Amar diido ay sameeyeen taliyaal ciidan.
Wararka inaga soo gaaraya gobolka Sanaag gaar ahaan furimiha adagaalka Somaliland ee gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in khilaaf uu soo kala dhaxgalay saraakiisha Somaliland ugu magacaaban gobolkaasi iyo Saraakiisha taliska guud ee Somaliland. Taliyaha guud
Degdeg:- Puntland oo markale ku dhawaaqday in ay xiriirkii ujartay DFS “Wax ka ogoow sababta”.
May 27, 2019 Xafiiska Puntland 4
Xukuumadda Puntland ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay, guud ahaan wada-shaqeyntii kala dhexasyay dowladda Federaalka Soomaaliya, inta laga heshiinayo arrimaha ay isku khilaafsan yihiin labada dhinac. Qoraal af-English ku qoran oo Puntland u dirtay Beesha
Daawo+Akhriso:- Magacyada 14ka Maxbuus ee Puntland lagu soo wareejiyay oo hargaysa lagaga dhawaaqay.
May 27, 2019 Xafiiska Puntland 3
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu cafis u fidiyay tiro Maxaabiis ah oo ka tirsanaa Ciidamada Puntlans, kuwaas oo ay sheegeen in lagu soo qabtay dagaalkii deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool ku dhexmaray
Daawo:- Wasiiro hore oo katirsanaa Xukuumadii Gaas iyo Gaadiid dagaal oo kubaxay Aaga Tukarraq + Fariin ay udireen Muuse Biixi.
Deegaano katirsan gobolka Sool wxaa gaaray wafdi siyaasiyiin ay horkacayaan qaar kamid ah wasiiradi xukuumadii hore ee Cabdiwali Gaas. Waxaa wehlinaya oo galbinaya gaadiid dagaal oo ay ku xiran yihiin hubka waawayn iyagoona shacabka kula